Maitiro ekunyorera sei asylum muTurkey? - ALinks
Kuti uwane hupoteri muTurkey unofanirwa kuendesa fomu yekupotera. Directorate-General for Migration Management (DGMM) inogamuchira chikumbiro chako chekupotera. Vanhu vakatiza kana kusiya nyika yavo nekuda kwehondo kana kutambudzwa. Uye havagone kudzokera kunyika yavo. Vane kodzero yekunyorera hupoteri muTurkey.
DGMM ndiro sangano repamutemo rinotarisa uye rinosarudza nezve maapplication ehupoteri. DGMM inosarudza kana usingakwanise kudzokera kunyika yako. Uye kungave kuri nemhaka yehondo, chitambudzo, kana kuti kumwe kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vanobvumira chikumbiro chako kana vakagumisa kuti haukwanisi kudzokera kumusha wakachengeteka. Mvumo inokupa iwe kuchengetedzwa kwenyika kuburikidza nehurumende yeTurkey.
Chikumbiro chakamisikidzwa chekupotera ndeche 'kuchengetedzwa kwenyika' maererano neTurkey Law. Kazhinji vanhu vari mukuvhiringika nezve manyorerwo ehupoteri muTurkey, saka verenga zvakawanda pazasi.
United Nations Refugee Agency (UNHCR) muTurkey inobatsira vamwe vari kutsvaga hupoteri. Ava ndivo vanhu vese vasiri vekuSyria kana vekuEurope. UNHCR inoita zvehupoteri Status determination (RSD) kune vanotsvaga hupoteri ava.
Kana UNHCR ichiziva chero munhu asiri weSyria kana mhuri sevapoteri muTurkey. UNHCR inoedza kuvagarisa patsva kune imwe nyika.
Maitiro ekunyorera sei asylum muTurkey
Zvinoenderana nemutemo weTurkey kana usingakwanise kudzokera kunyika yako nekuda kwekutya zvikonzero zvinotevera:
kutambudzwa kwedzinza rako, chitendero, maonero ezvematongerwo enyika, nyika yako, kana boka renzanga
mhirizhonga isingasaruri inobva mukurwisana kwenyika dzakawanda kana mudzimba
uri panjodzi yerufu, kurwadziswa, kubatwa zvisina hunhu kana kuzvidzikisira, kana kurangwa.
Mumamiriro ezvinhu akadaro, une kodzero yekutsvaga hupoteri muTurkey. Hurumende yeTurkey inosimbisa iyi mamiriro ekudzivirira pasi rose.
DGMM ichakubvunzurudza kuti sei wakasiya nyika yako uye kuti sei uchitya kudzoka.
Iyo DGMM inoongororawo mamiriro ari kwaunobva. Uye inotarisa matambudziko anosangana nevanhu vane maprofile akafanana. Saka iyo DGMM inosarudza kuti mamiriro ako akasiyana anokwana sei mumamiriro ari pamusoro.
Maitiro ekunyorera asylum muTurkey
Unonyoresa kune chero Provincial Directorates eMigration Management (PDMM) muTurkey.
Turkey haisi kuzokupomera mhosva yekugara zvisiri pamutemo kana zvisiri pamutemo kana ukanyorera hupoteri. Chero iwe uchipa chikonzero chakanaka chekupinda kwako. Mushure mekuita kunyoresa nePDMM zvinoenderana nemutemo unogona kugara muguta rakapihwa.
Mushure mekunyoresa, iwe, nemhuri yako, gamuchirai International Protection munyoreri ID. NeID iyi iwe nemhuri yako munogona kugara muTurkey negwaro reChitupa. Pagwaro racho, unogamuchira kudhindwa kwenhamba yemunhu yekunze kune imwe neimwe yenhengo. Iyi ID nhamba inopa mukana kune seti yekodzero uye masevhisi muTurkey kwauri nemhuri yako.
Mutemo unokusungira kuti ugare uchisangana nePDMM. Zvinogoneka nekutaura kuPDMM nguva nenguva nekusaina iwe pachako. Iwe unowana chiziviso chenguva yakarongwa yebasa rekusaina.
Kutevera siginicha, basa rakakosha. Kunze kwekunge iwe wapa zvikonzero zvine musoro zvekutadza kuzadzisa basa rekusayina. PDMM inofunga kuti chikumbiro chako chakabviswa. Vanopa mutongo wekuti unogona kukwidza nyaya mudare. Saka edza kusaina nenguva kudzivirira kudzingwa uye nzira dzedare.
Status yekuona maitiro anoitwa nevakuru veTurkey
Zviremera zveTurkey zvine basa rekutanga rekugamuchira uye kuongorora zvikumbiro zvekudzivirira kune dzimwe nyika.
Munguva yekunyoresa nePDMM, unofanirwa kupa ruzivo rwe
uchisiya nyika yako
ruzivo rwako mushure mekuenda
zviitiko zvinotungamira kune application.
Semutemo, iwe uchave nebvunzurudzo iwe pachako mukati memazuva makumi matatu kubva pazuva rekunyoreswa. Kunyangwe dzimwe nguva zvinogona kuitika gare gare. Zvakakosha kuvepo paPDMM panguva yako yakarongwa yekubvunzurudza. Iwe uchange uine mamwe mabvunzurudzo kana zvichionekwa zvakakodzera. DGMM inochengetedza kuvanzika kwekuzivikanwa kwako uye ruzivo rwakapihwa.
DGMM inofanirwa kuongorora zvikumbiro mukati memwedzi mitanhatu mushure mekunyoreswa. Asi dzimwe nguva zvinotora nguva yakareba. DGMM inotora sarudzo pamunhu. Mhuri dzinokumbira hupoteri nechikumbiro chimwe chete. Chisarudzo chakaitwa chichava chechokwadi kumhuri yese. DGMM inosarudza kutarisa mamiriro emunhu uye mamiriro azvino munyika yekumusha.
Maitiro ekukwidza nyaya
Kana chikumbiro chikagamuchira sarudzo isina kunaka. Kana kuti PDMM inozviona yakabviswa. Ipapo iwe unogona kukwidza chisarudzo chisina kunaka kana uchida. Iwe unofanirwa kuendesa chikumbiro chako mukati memazuva gumi. Unoiendesa kuInternational Protection Evaluation Commission. Inogonawo kuendeswa kudare rekutonga mukati memazuva makumi matatu. Kana iyo application iri mukukurumidza kuita kana isingabvumirwe. Ipapo unogona kukwidza kudare rekutonga mukati memazuva makumi matatu. Kana iwe ukatadza kukwidza sarudzo isina kunaka mukati menguva iyoyo sarudzo isina kunaka ichave yekupedzisira.
Ndinogona kunyorera hupoteri muTurkey ndega?
Kuti utsvage hupoteri muTurkey unofanirwa kuenda kuDGMM wokumbira kupotera. DGMM isangano rehurumende yeTurkey rinotarisira kuchengetedza vapoteri.
Ndinonyoresa sei kupotera muTurkey?
PMM ndiyo chiremera chenyika chakapihwa nemutemo wevatorwa & Dziviriro yepasi rose. Inobata kunyoresa uye kugadziriswa kwezvikumbiro. UNHCR inopa rutsigiro kuPMM panguva yekuumbwa, kunyoresa, uye kutumira.
Turkey ndeimwe yevakasaina gungano revapoteri ra1951. Turkey yakagamuchira gungano nemiganhu yenzvimbo. Saka Turkey inopa hupoteri hwakazara chete kuvanhu vanobva kunyika dziri nhengo dzeKanzuru yeEurope. Kune avo vanobva kunze kwenyika vanopa dziviriro shoma. Ichange iri muchimiro chenguva pfupi.
Mufananidzo uri pamusoro webutiro uri kumwe kuKayseri, Turkey. Mufananidzo na Ömer Haktan Bulut on Unsplash
Nzira yekunyorera sei asylum muBelarus?
Brazil - Mutemo wevapoteri
Maitiro ekunyorera asylum muUAE? Dziviriro yepasi rose muUnited Arab Emirates
Maitiro ekunyorera asylum muFrance?
Nzira yekuwana sei asylum muAfghanistan? Dziviriro yevanhu veAfghan uye chero ani zvake muAfghanistan